← UNHCR မှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ အရေး မည်သည့်နေရာတွင်မှ ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိ	ရခိုင် ၊ ကရင် တော်လှန်ရေးသမားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်း အပေါ် ကြေညာထုတ်ပြန်ချက်များ →	ဒုက္ခသည်များ အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ	May 19
Posted on May 19, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	1 Comment.	← UNHCR မှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ အရေး မည်သည့်နေရာတွင်မှ ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိ	ရခိုင် ၊ ကရင် တော်လှန်ရေးသမားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်း အပေါ် ကြေညာထုတ်ပြန်ချက်များ →	Leaveacomment
Ba Pe Nyein